द बिटल्स, रेड कि ब्लु ?- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
द बिल्टस ब्यान्ड आफैंमा एभरटनको समर्थक थियो कि लिभरपुलको । अब भनिरहनुपर्दैन, रेडभन्दा लिभरपुल हो भने ब्लुभन्दा एभरटन ।
श्रावण २१, २०७७ हिमेश
काठमाडौँ — लिभरपुल फुटबलका लागि मात्र चिनिने इंग्लिस सहर होइन, यो संगीतका लागि पनि नामुद छ । अझ पूरा विश्वमा यो सहरले फुटबललाई आफ्नो परिचय बनाउनु अगाडि संगीतबाट आफूलाई चिनाइसकेको थियो भन्दा हुन्छ । यो सहरका दुई प्रख्यात क्लब छन्, एभरटन र लिभरपुल ।
धेरै अगाडिदेखि एभरटन थियो । पछि लिभरपुल छुट्टियो । अनि यही सहरमा जन्मेर हुर्केको हो, द बिटल्स पनि । ‘फ्याब फोर’ अर्थात् जोन लेनन, पाउल म्याकार्टनी, जर्ज ह्यारिसन र रिंगो स्टोर ।
यी सबै यही लिभरपुल सहरकै हुन् । धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छन्, द बिटल्स रेड कि ब्लु ? यसको सांगीतिक अर्थ पनि लाग्छ, ब्यान्डका एल्बम यसरी पनि चिनिन्छन्, रेड र ब्लु भनेर । तर हाम्रो प्रश्न बेग्लै हो । यो प्रश्नले न त फुटबलबारे धेरै सोध्न खोज्छ, न त संगीतबारे । प्रश्नको सिधा अर्थ हो, द बिल्टस ब्यान्ड आफैंमा एभरटनको समर्थक थियो कि लिभरपुलको । अब भनिरहनुपर्दैन, रेडभन्दा लिभरपुल हो भने ब्लुभन्दा एभरटन ।
जतिबेला यो मर्सिसाइड सहर छिर्नुपर्छ, पहिलो प्रश्न यही हुन्छ रे, तपाईं रेड कि ब्लु ? द बिटल्सका चार सदस्यले साँच्चै कुन क्लबलाई समर्थक गर्दा हुन् ? भर्खरै लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिग उपाधि जित्यो । त्यसको चर्चा अझै सेलाएको छैन । चर्चा अब फैलिएर त्यसमा अनेक आयाम थपिएका छन् । त्यसमध्ये एउटा चर्चा हो, द बिटल्सका सदस्यको फुटबलमा कति रुचि थियो अनि यो कुन मर्सिसाइड क्लबतर्फ ढल्किएको थियो त ?
द गार्डियनका केही पुराना समाचारमा यसबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसकै सहयोगमा अहिलेसम्म पनि यसबारे बहस हुने गर्छ । खासमा यो निकै दोहोर्‍याएर सोधिने प्रश्न हो । यसको अहिलेसम्म ठ्याक्कै उत्तर छैन । रमाइलो त केमा पनि छभन्दा दुवै क्लबका समर्थक दाबी गर्ने गर्छन्, द बिटल्स त हाम्रो टिमको समर्थक हो । अलिक नरमाइलो तथ्य के छ भने द बिटल्सका सदस्य फुटबलमा मरिहत्ते गर्ने खालका थिएनन् । जस्तो यो सहरका अन्य सबैका लागि फुटबल भनेको सबथोक हो ।
द बिटल्सबारे मात्र खोजेर, सोधेरे इतिहासकार भएका धेरै बेलायततिर पाइन्छ । त्यसमध्ये एक हुन्, रे ओ’ब्राइन पनि । उनकै शब्दमा भन्दा द बिटल्सलाई साँच्चै फुटबलमा उति साह्रो रुचि थिएन । यो ब्यान्डको सबैभन्दा चर्चित एल्बममा पर्छ, ‘सार्जेन्ट पेपर्स लोनली हार्टस ब्यान्ड’ । यो एल्बमको कभरमा धेरैको अनुहार छ । यसमध्ये एकै मात्र फुटबल खेलाडी परेका छन् । उनी हुन्, लिभरपुलका अल्बर्ट स्टबिन्स । आफ्नो समयमा उनी कहलिएकै खेलाडी थिए । भनिन्छ, उनको तस्बिर हाल्न जिद्दी गर्ने लेनन थिए । लेननको बुबा भने लिभरपुलका जबरदस्त समर्थक थिए । त्यसैले लेननले यो काम गरेका थिए भनिन्छ । तर लेननलाई जति फुटबलमा रुचि थियो, त्योभन्दा धेरै रुचि म्याकार्टनीमा थियो । यिनै दुई त हुन्, ब्यान्डका फ्रन्टम्यान । म्याकार्टनीले सानो छँदै रंगशालामै गएर धेरैपल्ट फुटबल हेरेका थिए र त्यो रंगशाला अरू नभएर गुडिसन पार्क थियो अर्थात् एभरटनको घर । उनका बुबा र काकाहरू एभरटन समर्थक थिए, त्यसैले फुच्चै म्याकार्टनीलाई पनि आफूसँगै गुडिसन पार्क लान्थे ।
म्याकार्टनीले सन् १९६५ मा वेम्बलीमा गएर पनि फुटबल हेरेका रहेछन् र यो एफए कपको फाइनल थियो । उनी सक्दो आफ्नो परिचय लुकाएर त्यहाँ गएका थिए । खेल थियो, लिभरपुलविरुद्ध लिड्स । मैदान छिर्न लाग्दा कसैले उनलाई देखेछन् र चिनेछन् । ती लिभरपुल समर्थकले उनलाई आफ्नो रातो स्कार्फ दिएछन् र म्याकार्टनीले पनि त्यसलाई खुसी खुसी आफ्नो घाँटीमा बेरेछन् । त्यसको अर्थ म्याकार्टनी लिभरपुलका समर्थक थिए कि ? त्यो फाइनलअगाडि द बिटल्सले लिभरपुललाई एउटा टेलिग्राम पनि पठाएको थियो । त्यतिबेला लिभरपुलका व्यवस्थापक थिए, प्रसिद्ध बिल स्यान्की । टेलिग्राममा लिभरपुलले उपाधि जितोस् भनेर शुभकामना दिइएको थियो । यो टेलिग्राफ स्यान्की होटलमा खुला रूपमा प्रदर्शनमा राखिएको छ ।
यो त पयर्टनका लागि पनि आकर्षण हुने गरेको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘शुभकामना छ, केटा हो, हामी पनि यो खेल हेर्दै छौं । उही जोन, पाउल, जर्ज र रिंगो’ । स्वयं म्याकार्टनीलाई यो प्रश्न धेरैपल्ट सोधिएको थियो, रेड कि ब्लु भनेर । उनी प्रायः कूटनीतिक जवाफ दिन्थे र भन्थे, ‘हामी त दुवै क्लबलाई उत्तिकै माया गर्छौं । सफलता र प्रख्यातिको त्यो शिखरमा पुगेर द बिटल्सका कोही पनि सदस्य आफ्नो प्रशंसकलाई निराश पार्न चाहँदैनथे । उनीहरूलाई डर थियो, एउटा क्लबको नाम लिँदा अर्को क्लबका समर्थक निराश हुनेछन् ।
त्यसैले पनि द बिटल्सको मन पर्ने क्लबबारे यति साह्रो दुविधा भएको हो । एकपल्ट भने म्याकार्टनीलाई खुबै करकाप गरिएको थियो रे, साँच्चै कुन क्लब मन पर्छ त भनेर ? यस्तोमा म्याकार्टनीले भनेछन्, ‘अब दुईमध्ये एक क्लबलाई छान्नैपर्‍यो भने म एभरटनलाई छान्छु, किनभने मेरो परिवारका लगभग सबै सदस्य यही क्लबका प्रशंसक छन् ।’ त्यसैले नै होला, केही वर्षअगाडि खुबै हल्ला पनि चलेको थियो, म्याकार्टनीले एभरटन किन्दै छन् भनेर । एभरटनका समर्थकले त त्यही बेला यसबारे लहर नै चलाएका पनि थिए ।
म्याकार्टनीको पछि केनी डगलससँग राम्रो दोस्ती जमेछ । त्यतिबेला भने उनले भनेका थिए, ‘मैले त अब लिभरपुललाई मन पराउन थालेको छु ।’ डगलस लिभरपुलका लेजेन्डरी खेलाडी र प्रशिक्षक दुवै भए । म्याकार्टनी त लिभरपुल सहरमा फुटबलको इतिहासबारे धेरथोक जानकारी नि राख्छन् । त्यसैले उनले यस्तो पनि भन्ने गरेका छन्, लिभरपुलमा फुटबल संस्कृति गज्जब छ, एउटै परिवारमा श्रीमान् एभरटन समर्थक हुन सक्छन्, श्रीमती लिभरपुल । वा बुबा लिभरपुल समर्थक भने छोरा एभरटन ।
द बिटल्सका चार सदस्यमध्ये ह्यारिसनलाई भने फुटबलमा पटक्कै रुचि थिएन भनिन्छ, भलै उनले पनि एकपल्ट म्यानचेस्टर युनाइटेड र एस्टन भिल्लाबीचको खेल हेरेका थिए, रंगशालामै पुगेर । उनलाई पनि मुखमै एकपल्ट सोधिएको थियो, रेड कि ब्लु भनेर । त्यतिबेला उनले गज्जब उत्तर दिएका थिए र यो बढीभन्दा बढी अमूर्त थियो । उनले भनेका थिए, ‘लिभरपुलमा तीन क्लब छन्, म तेस्रो टिमलाई समर्थन गर्छु ।’
अब कसैले भन्न सकेन, यो तेस्रो क्लब हो चाहिँ कुन ?
हाकाहाकी उनी यही क्लबलाई समर्थन गर्छन् भनेर भन्न सकिने भने स्टोरलाई हो । द बिटल्सका यी ड्रमरको जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव कसैको थियो भने त्यो उनको सौतेली बुबाको थियो । यी बुबा लन्डनका रहेछन्, त्यसैले उनी आर्सनलका समर्थक रहेछन् । आफ्ना ती बुबासँग आर्सनल टिम लिभरपुलमा आउँदा बरोबर रंगशालामै गएर फुटबल हेर्न जान्थे, त्यसैले उनी पनि आर्सनलकै समर्थक बने । लिभरपुलका मान्छे अनि आर्सनलको समर्थक, यो समीकरण भने अचम्मको छ ।
एउटा तथ्य के हो भने लिभरपुल सहरमा एभरटन र लिभरपुलमध्ये कुन क्लबलाई समर्थन गर्ने हो, त्यसको कुनै राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक कारण हुने गर्दैन । परिवारमा कुन सदस्यको प्रभाव पर्ने हो, त्यसैले निर्भर हुने गर्छ । एभरटनले भन्ने गर्ने जस्तै यसका समर्थक कुनै कारखानामा बन्ने होइन, जन्मेर बन्ने हो । यो सहरमा पहिलो जन्मेको क्लब यही एभरटन नै हो अर्थात् ब्लु । तर रेड अर्थात् लिभरपुल सन् ७० यता यति धेरै सफल रह्यो कि एभरटन ओझेलमा पर्‍यो, हराएको जस्तै भएर ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०९:२४
आँखा देख्नेको तुलनामा दृष्टिविहीनहरूलाई केही चुनौती अवश्य छन् । चुनौती हुनुको कारण दृष्टिविहीन कमजोर भएर भन्दा पनि अपांगतामैत्री संरचनाहरूको अभाव र साँघुरो सोच भएर हो ।
श्रावण २१, २०७७ सरिता लामिछाने
प्रश्नहरू यस्ता साध्य हुन् जसलाई व्यक्तिहरूको जिज्ञासा मेटाउन, क्षमताको परीक्षण गर्न र बहसहरू चलाउन प्रयोग गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रश्नको निरन्तर उत्तर दिइरहनुपर्छ । प्रसंग यहाँ दृष्टिसम्बन्धी अपांगताको हो ।
के हो त दृष्टिसम्बन्धी अपांगता ? देहायबमोजिमका समस्याबाट कुनै व्यक्तिमा कुनै पनि वस्तुको आकृति, आकार, रूप र रङको ज्ञान नहुनु नै दृष्टिसम्बन्धी अपांगता हो–
(क) दृष्टिविहीनता : औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि दुवै आँखाले हातको औंला दस फिटको दूरीबाट छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको पहिलो लाइनका अक्षर (३/६०) मा पढ्न नसक्नु ।
(ख) न्यून दृष्टियुक्त : औषधि, शल्यचिकित्सा, चस्मा वा लेन्सको प्रयोगबाट पनि बीस फिटको दूरीबाट हातको औंला छुट्याउन नसक्ने वा स्नेलेन चार्टको चौथो लाइनका अक्षर (६/१८) मा पढ्न नसक्नु ।
(ग) पूर्ण दृष्टिविहीन : पूर्ण रूपमा उज्यालो वा अँध्यारो छुट्याउन नसक्नु । दृष्टिविहीनता जन्मजात हुनु, टाइफाइड, दादुरा, आँखा पाक्ने आदि रोगको समयमा उपचार नहुँदा र विभिन्न दुर्घटनाका कारण उत्पन्न हुने गर्छ ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार १.९४ प्रतिशत नेपाली (५,१३,३०१) मा कुनै न कुनै किसिमको अपांगता छ । त्यसमध्ये १८.४६ प्रतिशतमा दृष्टिसम्बन्धी अपांगता छ । यस्तो अपांगता नेपालजस्तो राष्ट्रमा पुरानो मानक (१० प्रतिशत) भन्दा कम र विश्वव्यापी औसतभन्दा निकै कम हुनु अपत्यारिलो भएको र वास्तविक संख्या बढी हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘अपांगता भएका व्यक्ति जन्मे संघसंस्था’ भन्ने भ्रमलाई सत्य ठान्दै आएको नेपाली समाजले दृष्टिविहीनलाई अझै पनि परनिर्भर र असमर्थ व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ । कहिले देवत्वकरण गर्ने गरिएको पनि छ । हो, दृष्टिविहीनले केही काम–कुरामा अरूको सहयोग लिनुपर्छ, तर संसार नै एकअर्काको सहयोगबाट चलेको हुन्छ ।
आँखा देख्नेहरूले पनि एक्लै सबै काम–कुरा गर्न सक्दैनन् । तैपनि आँखा देख्नेको तुलनामा दृष्टिविहीनहरूलाई केही चुनौती भने अवश्य छन् । चुनौती हुनुको कारण दृष्टिविहीन कमजोर भएर भन्दा पनि अपांगतामैत्री संरचनाहरू निर्माण नभएर र साँघुरो सोच भएर हो । दृष्टिविहीनहरूले धारावाहिक रूपमा विविध प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । कतिपय प्रश्न त सुन्दैमा अचम्म लाग्ने खालका हुन्छन्, मानौं दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू कुनै अर्को ग्रहका हुन् । कुनै विद्यालयमा अध्यापन गराउने एक शिक्षिकाले फरक स्वरूपको आँखा भएका एक दृष्टिविहीनलाई भेटेर आएपछि मसँग सोध्नुभयो, ‘उसलाई त निदाउन पनि पर्दैन होला है ? उसको आँखाको स्वरूप नै छैन ।’ निद्रा समग्र शरीरका लागि अत्यावश्यक छ, आँखाका लागि मात्र होइन । आँखाको स्वरूप अन्य व्यक्तिको जस्तो नहुँदैमा निद्रा नलाग्ने अथवा निदाउन नपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यस्तै, एक ‘मोटिभेसनल स्पिकर’ लाई एउटा विद्यालयमा ‘स्पिच’ दिएपछि अन्तरक्रियाका क्रममा पाँच कक्षाकी बालिकाले सोधेकी थिइन्, ‘म्याडम, तपाईंले पनि खाना खानुहुन्छ ?’
दृष्टिविहीन जीवनमा निरन्तर आउने त्यस्तै केही प्रश्न हुन्–
(क) आँसु आउँछ कि आउँदैन ? : अवश्य आउँछ । अन्य व्यक्तिका आँखाबाट जसरी आँसु आउँछ, त्यसरी नै आउने गर्छ । आँसु आउनका लागि दृश्य नै हेर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
(ख) सपनामा आँखा देख्छन् ? : जन्मजात रूपमा दृष्टिविहीनले विपनामा जस्तो जीवन बिताउँछन्, त्यसकै प्रभाव सपनामा हुने गर्छ । उनीहरूले सपना त देख्छन्, तर त्यो वास्तविक जीवनशैली जस्तै आवाज र स्पर्शमा केन्द्रित हुने गर्छ । तथापि पछि दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सपनामा आँखा देख्ने गर्छन्, जुन उनीहरूका पूर्वस्मृतिहरूको झलक हो ।
(ग) कसरी खाना खान्छन् ? : अवश्य आफैं खान्छन्, हात वा चम्चाले मुखमा लगेर । आँखा नदेख्दैमा मुख पहिल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । दृष्टियुक्त व्यक्तिहरूले पनि खाना खाँदाखाँदै बत्ती गयो भने गाँस नाकमा त अवश्य लैजाँदैनन् ।
(घ) मान्छे कसरी चिन्छन् ? : जसरी आँखा देख्ने व्यक्तिले एकपटक देखेका व्यक्तिलाई उसको अनुहार हेरेर चिन्छन्, त्यसरी नै हामी दृष्टिविहीनले आवाज सुनेर अर्कोपटक सहजै चिन्न सक्छौं । तथापि भीडभाड र होहल्ला भएको ठाउँमा र धेरै वर्षको अन्तरालमा भेट्दा भने व्यक्तिविशेषको आवाज सहजै चिन्न नसकिने भने हुन सक्छ, जुन समस्या दृष्टियुक्त व्यक्तिलाई समेत हुने गर्छ । भारतको बेङ्लोरमा इन्टर्नसिप गर्न बस्दा मलाई एक व्यक्तिले सोध्नुभएको थियो, ‘तपाईं आफ्ना बाबालाई कसरी चिन्नुहुन्छ ?’ एकपटक भेटिएको व्यक्तिलाई त अर्कोपटक भेट्दा सहजै चिन्न सक्नेहरूले आफ्ना बाबाआमा नचिन्ने सवाल हुँदैन । आफूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको हिँडाइको तरिका र शारीरिक गन्धले पनि दृष्टिविहीनहरूले व्यक्ति पहिचान गर्न सक्छन् ।
(ङ) शौचालय प्रयोग गर्न सक्छन् ? : आफू निरन्तर बस्ने ठाउँमा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् । नयाँ ठाउँमा भने आँखा देख्ने व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ, ढोकासम्म पुग्नका लागि, भित्रै पुर्‍याइदिनु भने पर्दैन । ट्वाइलेट, कमोड अथवा प्यानवाला के हो, धारा अथवा पानी भरेर राखेको भाँडो र डस्टबिन कतापट्टि छ भन्ने भन्दिए पुग्छ । शौचालयमा बगिरहने पानीको आवाज, गन्ध आदिबाट पनि दृष्टिविहीनले अपरिचित ठाउँमा शौचालय पत्ता लगाउन सक्छन् ।
(च) कसरी नुहाउँछन् ? : अरू व्यक्तिले जसरी नुहाउँछन्, त्यसरी नै । आँखा देख्ने व्यक्तिहरूले पनि नुहाउन ऐना हेरिराख्नु पर्दैन होला ।
(छ) कपाल कसले कोरिदिन्छ ? : आफैं कोर्न सक्छन् । यसमा अरूको सहयोग चाहिँदैन ।
(ज) आफ्नो घर/कार्यालय कसरी पत्ता लगाउँछन् ? : दृष्टिविहीनहरू कुनै पनि कुरा पत्ता लगाउन स्पर्श, गन्ध र आवाजमा निर्भर हुने गर्छन् । सोही कुरा दैनिक जीवनमा लागू हुन्छ । दृष्टिविहीनले फर्निचरको आवाज, मसला, तरकारी, माछा वा मासु पसलहरूको गन्ध, होटलको बास्ना, ग्रामीण परिवेशमा हावा र चराचुरुंगीको आवाज आदिलाई घर/कार्यालय चिन्ने आधार बनाउने गर्छन् ।
(झ) आफ्ना लत्ताकपडा कसरी चिन्छन् ? : दृष्टिविहीनले लुगा त्यसमा भएको टाँक, हुक, गला र बाहुलाको प्रकार, चिल्लो खस्रो, डिजाइनलाई छामेर पत्ता लगाउँछन् । अन्य कपडा कुनको सेट कुन हो भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । मोजा पहिचानमा भने कहिलेकाहीँ चुनौती आउन सक्छ ।
(ञ) लत्ताकपडा कसले धोइदिन्छ ? : दृष्टिविहीनले आफ्ना लत्ताकपडा आफैं धुन सक्छन् । साबुन निख्रेको र ननिख्रेको छामेरै थाहा पाउन सक्छन् ।
(ट) कसरी लेखपढ गर्छन् ? : दृष्टिविहीनले ब्रेललिपिबाट पढ्ने गर्छन्, जुन ६ वटा डटबाट बनेको हुन्छ । ब्रेललिपि लेख्न स्लेट स्टाइलस र बाक्लो पेपरको प्रयोग गरिन्छ । ब्रेल लेख्दा दाहिने साइडबाट लेखिन्छ भने पढ्दा देब्रे साइडबाट पढिन्छ । पढ्दा हातको औंलाले छाम्दै पढ्ने गरिन्छ । पहिलोपटक ब्रेललिपिको पाठ्यपुस्तक देख्नेले कनिका छरेको जस्तो देख्छन् ।
(ठ) कम्प्युटरमा कसरी काम गर्छन् ? : दृष्टिविहीनले जज र एनभीडीए नामक स्क्रिनरिडर सफ्टवेयरको सहायताले कम्प्युटरमा काम गर्छन्, जसले स्क्रिनमा देखेको बोलिदिने गर्छन् । अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरूले म्याग्निफायरको पनि प्रयोग गर्छन् ।
(ड) ब्लाइन्ड फोल्ड लगाएर दृष्टिविहीन जीवनको अनुभव गर्न सकिन्छ ? : दृष्टिविहीन भएको बहाना गर्न प्रयास गर्नु राम्रो विचार होइन । तपाईंलाई कुनै चीज खोज्न गाह्रो पर्न सक्छ, केही वस्तुसँग ठोक्किएर आफैंलाई चोट पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ । तपाईं डराउनुहुन्छ, निराश वा अलमल पर्न सक्नुहुन्छ । परिणामस्वरूप तपाईं दृष्टिविहीनको वास्तविक जीवन यस्तै हुन्छ भनी सोच्न सक्नुहुन्छ, जसबाट दृष्टिविहीनको जीवनशैलीप्रति विपरीत धारणा बन्न सक्छ । हामी दृष्टिविहीनले सक्रिय र हर्षित जीवन बिताइरहेका छौं ।
समाजले दृष्टिविहीनतालाइ पूर्वजन्मको पाप, अक्षमता र बिचराको पात्र नबनाएमा र अन्य व्यक्तिसरह मानवको दर्जा दिएमा जीवन प्रभावकारी हुन्छ र समाजले पनि छलाङ मार्न सक्छ ।
(दृष्टिविहीन लामिछाने अपांगता भएका महिलाहरूको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छिन् ।)
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०९:०२